Indlela Amaqembu Akho Okuthengisa Nezokumaketha Angayeka Ngayo Ukuba Nesandla Ekukhathaleni Kwedijithali | Martech Zone
Amaqembu Akho Okuthengisa Nezokumaketha Angayeka Kanjani Ukuba Nesandla Ekukhathaleni Kwedijithali
NgoLwesithathu, Februwari 16, 2022 NgoLwesithathu, Februwari 16, 2022 Douglas Karr
Iminyaka embalwa edlule ibe inselele emangalisayo kimina. Ngasohlangothini lomuntu siqu, ngabusiswa ngomzukulu wami wokuqala. Ngasohlangothini lwebhizinisi, ngihlanganyele nabanye ozakwethu engibahlonipha kakhulu futhi sakha i-digital transformation consultancy eqalayo ngempela. Impela, maphakathi nalokho, kube nobhubhane oluphazamise umzila wethu wepayipi nokuqasha… oselubuyela endleleni manje. Faka lokhu kushicilelwa, ukuphola, nokufaneleka… futhi impilo yami iyizu manje.
Into eyodwa okungenzeka ukuthi uyibonile kule minyaka embalwa edlule ukuthi ngimise i-podcasting yami. Nganginamaphodikasti asebenzayo angu-3 eminyakeni embalwa edlule - ezokukhangisa, ezebhizinisi lendawo, kanye nokweseka omakadebona. I-Podcasting iwuthando lwami, kodwa njengoba ngibheka isizukulwane sami esihamba phambili nokukhula kwebhizinisi, bekungahlinzeki ngokukhula kwemali engenayo ngokushesha ngakho kwadingeka ngikubeke eceleni. I-podcast yemizuzu engama-20 ingase inciphise cishe amahora angu-4 osukwini lwami lokusebenza ukuze ngihlele, ngirekhode, ngihlele, ngishicilele futhi ngikhuthaze isiqephu ngasinye. Ukulahlekelwa izinsuku ezimbalwa ngenyanga ngaphandle kokubuyisela ngokushesha ekutshalweni kwezimali kwakungeyona into engingakwazi ukuyikhokhela njengamanje. Inothi eseceleni… Ngizophinda ngibandakanye iphodikasti ngayinye ngokushesha nje lapho sengikwazi ukukhokhela isikhathi.
Ukukhathala kwedijithali kuchazwa njengesimo sokukhathala kwengqondo esilethwa ukusetshenziswa ngokweqile nangesikhathi esisodwa kwamathuluzi edijithali amaningi.
U-Lixar, Ophethe Ukukhathala Kwedijithali
Angikwazi ngisho ukukutshela ukuthi mangaki amakholi wefoni, imilayezo eqondile, nama-imeyili engiwathola nsuku zonke. Iningi liyizicelo, abanye abangani nomndeni, futhi - vele - ku-haystack kukhona umkhondo kanye nokuxhumana namaklayenti. Ngenza konke okusemandleni ami ukuze ngihlunge futhi ngihlele ngokusemandleni ami, kodwa angiqhubeki… nhlobo. Ngesinye isikhathi emsebenzini wami, ngaba nomsizi omkhulu futhi ngibheke phambili kulokho kunethezeka futhi… kodwa ukuqongelela umsizi kudinga nesikhathi. Ngakho-ke, okwamanje, ngimane ngihlupheke ngakho.
Ukuhlanganisa umsebenzi phakathi kwamapulatifomu engiwenza usuku lonke, ukukhathala kokuxhumana kwedijithali nakho kuyamangaza. Eminye yemisebenzi engicindezela kakhulu yile:
Nginezinkampani ezibandayo eziphumayo eziphendula ngokuzenzakalelayo futhi zigcwalise ibhokisi lami lokungenayo usuku ngalunye ngemilayezo ewubulima efana nokuthi, Iyisa lokhu phezulu kwebhokisi lakho lokungenayo... noma ukuvala i-imeyili nge RE: emgqeni wesihloko ukucabanga ukuthi sike sakhuluma ngaphambili. Ayikho into ecasula njengalokhu... Ngingabheja lena ingxenye yebhokisi lami lokungenayo manje. Ngokushesha nje lapho ngibatshela ukuthi bayeke, kungena omunye umjikelezo wokuzenzakalela. Kuye kwadingeka ngikhiphe imithetho ethile yokuhlunga ehlakaniphile nehlakaniphile yebhokisi leposi ukuze ngizame ukuletha imilayezo ebalulekile ebhokisini lami lokungenayo.
Nginezinkampani ezithile ezincama ukungithinta nge-imeyili, bese zingithumelela umlayezo kuzo zonke izinkundla zokuxhumana. Uyitholile i-imeyili yami? kuyindlela eqinisekile yokuthi ngikuvimbe ezinkundleni zokuxhumana. Ukube bengicabanga ukuthi i-imeyili yakho ibalulekile, ngabe ngiphendule... yeka ukungithumelela ukuxhumana okwengeziwe futhi uvale yonke imidiya enginayo.
Okubi kakhulu ozakwethu, abangani, nomndeni abavutha bhe futhi bakholelwa ukuthi ngidelile ngoba angiphenduli. Impilo yami IGCWELE njengamanje futhi iyamangalisa ngokuphelele. Ukungalazisi iqiniso lokuthi ngimatasa nomndeni, abangani, umsebenzi, ikhaya, ukuqina, nokushicilelwa kwami ​​kuyadumaza kakhulu. Manje ngihambisa okwami Ngokukhazimulayo isixhumanisi kubangani, umndeni, kanye nozakwethu ukuze bagcine isikhathi ekhalendeni lami. Futhi ngivikela ikhalenda lami!
Sengiyaqala ukubona izinkampani eziningi zi-SPAM imiyalezo yami yombhalo… okungaphezu kokucasuka. Imiyalezo yombhalo iyona engenelela kakhulu futhi iyodwa kuzo zonke izindlela zokuxhumana. Umlayezo wombhalo obandayo kimi uyindlela eqinisekile yokuthi ngingaphinde ngenze ibhizinisi nawe.
Angingedwa... ngokwemiphumela emisha yocwaningo evela ku-PFL:
Umphathi ngabaphenduli be-C-Level bathola izikhathi ezingaphezu kuka-2.5 mama-imeyili okukhangisa angeviki onke, isilinganiso Ama-imeyili angama-80 ngesonto. Inothi eseceleni… Ngithola okungaphezu kwalokho ngosuku.
Ochwepheshe bebhizinisi bathola i isilinganiso sama-imeyili angama-65 ngeviki.
Abasebenzi abangamaHybrid bathola ama-imeyili angama-31 kuphela ngesonto.
Izisebenzi ezikude ngokugcwele ziyamukelwa ama-imeyili angaphezu kuka-170 ngesonto, ama-imeyili amaningi ngokuphindwe ka-6 kunesisebenzi esijwayelekile.
Over ingxenye yabo bonke abasebenzi babhekene nokukhathala ngenxa yomthamo wokuxhumana okudijithali abakuthola emsebenzini. U-80% wabaphenduli bezinga C bakhungathekile ngenani lokukhushulwa kwedijithali abakutholayo!
Ngibhekana Kanjani Nokukhathala Kwezokuxhumana Kwedijithali
Indlela engisabela ngayo ekukhathaleni kokuxhumana kwedijithali ithi:
Misa - Uma ngithola ama-imeyili amaningi abandayo noma imilayezo, ngitshela umuntu ukuthi ame futhi angisuse kusizindalwazi sakhe. Isikhathi esiningi, iyasebenza.
Ungaxolisi - Angikaze ngithi "Uxolo ...” ngaphandle uma ngibeka ithemba lokuthi ngizophendula ngesikhathi esithile. Lokhu kufaka phakathi amaklayenti akhokhayo engiwakhumbuza njalo ukuthi ngihlele isikhathi nawo. Angiyaxolisa ukuthi ngimatasa ngomsebenzi ogcwele kanye nempilo yomuntu siqu.
Susa - Ngivame ukususa imilayezo ngaphandle kwempendulo futhi abantu abaningi abazihluphi ngokuphinda bangifake UGAXEKILE.
Hlunga – Ngihlunga amafomu ami, ibhokisi lokungenayo, nezinye izisetshenziswa ezizindeni namagama angukhiye engingeke ngiwaphendule. Imilayezo isuswa ngokushesha. Ingabe ngithola imilayezo ebalulekile exutshwe ngezinye izikhathi? Yebo… oh kahle.
Beka phambili – Ibhokisi lami lokungenayo liwuchungechunge lwamabhokisi e-imeyili Ahlakaniphile ahlungwa kakhulu ngamakhasimende, imilayezo yesistimu, njll. Lokhu kungenza ngikwazi ukuhlola kalula ngalinye bese ngiphendula kuyilapho lonke ibhokisi lami lokungenayo ligcwele umbhedo.
Ungaphazamisi – Ifoni yami ivuliwe Ungaphazamisi futhi ivoyisimeyili yami igcwele. Yebo… ngaphandle kwemiyalezo yombhalo, izingcingo ziyiziphazamiso ezimbi kakhulu. Ngigcina isikrini sefoni yami sivuliwe ukuze ngibone ukuthi ingabe ikholi ebalulekile evela kosebenza naye, iklayenti, noma ilungu lomndeni, kodwa wonke umuntu angayeka ukungishayela.
Ongakwenza Ukuze Usize Ukukhathala Kwezokuxhumana Kwedijithali
Nazi izindlela eziyisishiyagalombili ongasiza ngazo emizamweni yakho yokuthengisa nokumaketha.
Thola Okomuntu Siqu – Yazisa umamukeli wakho ukuthi kungani udinga ukuxhumana naye, umuzwa wokuphuthuma, nokuthi kungani kunenzuzo kuye. Akukho okubi kakhulu, ngokubona kwami, kunomlayezo ongenalutho othi “Ngizama ukukuthola…”. Anginandaba… Ngimatasatasa futhi uvele wehlela phansi ezintweni eziza kuqala kimi.
Ungasebenzisi Okuzenzakalelayo – eminye imiyalezo ibalulekile emabhizinisini. Izinqola zokuthenga ezilahliwe, ngokwesibonelo, ngokuvamile zidinga izikhumbuzo ezimbalwa zokwazisa othile ukuthi ushiye ngemuva umkhiqizo ekalishini. Kodwa ungalibali… Ngibekela amakhasimende lezi zinto… usuku, izinsuku ezimbalwa, bese kuba amaviki ambalwa. Mhlawumbe abanayo nje imali yokuthenga okwamanje.
Setha Okulindelekile - Uma uzozenzela noma ulandelele, yazisa lowo muntu. Uma ngifunda ku-imeyili ukuthi ucingo olubandayo luzolandelelwa ezinsukwini ezimbalwa, ngizobazisa ukuthi bangazihluphi namuhla. Noma ngizobabhalela ngibazise ukuthi ngimatasa bese ngithinta isisekelo kwikota elandelayo.
Bonisa Uzwela - Nganginomeluleki kudala owathi njalo lapho ehlangana nomuntu okokuqala, wenza sengathi balahlekelwe nje emndenini wabo. Ayekwenza kwakuwukulungisa uzwela lwakhe nenhlonipho ngomuntu. Ungakwazi ukuzenzela ama-imeyili kothile ongekho emngcwabeni? Angiboni. Ngoba ibalulekile kuwena akusho ukuthi ibalulekile kubo. Yiba nozwela ngokuthi bangase babe nezinye izinto eziza kuqala.
Nikeza Imvume - Enye yezindlela ezingcono kakhulu zokuthengisa ukunikeza imvume kumuntu ukuthi asho Cha. Ngibhale ama-imeyili ambalwa enyangeni edlule kwabalindelwe futhi ngivula i-imeyili ngokubazisa ukuthi lena iyodwa futhi i-imeyili abayitholayo futhi ngiyajabula kakhulu ukuzwa ukuthi abaswele. yezinkonzo zami. Ukunikeza umuntu imvume yokuthi Cha kuzosiza ekuhlanzeni ibhokisi lakhe lemilayezo engenayo futhi kuzokuvumela ukuba ungachithi isikhathi ngokucasula okungenzeka okungenzeka.
Nikeza Izinketho – Angifuni ngaso sonke isikhathi ukuqeda ubudlelwano engibathandayo, kodwa ngingafuna ukuzibandakanya ngenye indlela noma ngesinye isikhathi. Nikeza umamukeli wakho ezinye izinketho - njengokulibaziseka inyanga noma ikota, ukunikeza isixhumanisi sakho sekhalenda isikhathi esimisiwe, noma ukungena kwezinye izindlela zokuxhumana. Imidiya oyikhonzile noma indlela yokuxhumana ingase ingabi eyabo!
Thola ngokomzimba - Njengoba ukuvalwa kwe-Lockdown kuncipha futhi nokuhamba kuvulwa, yisikhathi sokubuyela ekuhlanganeni nabantu mathupha lapho ukuxhumana kuhlanganisa yonke imizwa edingwa abantu ukuze bakhulume ngokuphumelelayo. Ukuxhumana okungakhulumi ngomlomo kubalulekile ekusunguleni ubudlelwano… futhi lokho ngeke kufezwe ngemiyalezo ebhaliwe.
Zama I-Direct Mail - Ukuthuthela kuma-mediums angenele kakhulu kumamukeli ongaphenduli kungaba indlela engalungile. Uke wazama ukusebenzisa izindlela ezengeziwe ezifana ne-imeyili eqondile? Sibe nempumelelo enkulu ngokukhomba amathuba ngeposi eqondile ngoba azikho izinkampani eziningi ezisizakala ngakho. Nakuba i-imeyili ingabizi kakhulu ukuyiletha, ucezu lwakho lwemeyili eqondile alungcwatshwa ebhokisini leposi nezinkulungwane zezinye izingcezu zemeyili eziqondile.
Nakuba imeyili eqondile eqondiswe kabi izozitshwa abathengi kaningi njengezikhangiso zedijithali ezingaphandle kwesisekelo noma ukuqhuma kwe-imeyili, imeyili eqondile efakwe kahle ingadala ukuzizwisa okukhumbulekayo nokunomthelela. Uma ihlanganiswe namasu okumaketha enhlangano, i-imeyili eqondile ivumela izinkampani ukuthi zishayele i-ROI enkulu futhi zikhulise ukuhlobana komkhiqizo phakathi kwamakhasimende amanje nawesikhathi esizayo.
U-Nick Runyon, i-CEO ye-PFL
Wonke Umuntu Uhlangabezana Nokukhathala Kwedijithali
Esimeni sanamuhla sebhizinisi, ukuncintisana kokuvelayo, ukuchofoza, nokwabelana ngengqondo kushubile. Naphezu kwamathuluzi okumaketha okudijithali anamandla futhi atholakala yonke indawo, amabhizinisi amaningi azithola edonsa kanzima ukuze athole ukuthandwa phakathi kwamakhasimende namathemba.
Ukuze uqonde kangcono ubunzima izinkampani eziningi ezibhekana nazo ekubambeni ukunaka kwezethameli, i-PFL yenze inhlolovo ochwepheshe bamabhizinisi abazinze e-US abangaphezu kuka-600. Imiphumela ye-PFL 2022 Hybrid Audience Engagement Survey sithole ukuthi ukwenza kube ngokwakho, okuqukethwe, namaqhinga okumaketha aphathekayo, njenge-imeyili eqondile, kungaba nomthelela omkhulu kumakhono emikhiqizo okufinyelela izethameli ezikhathele.
Chofoza Lapha Ukuze Ulande I-Infographic
Okutholwe okubalulekile okuvela kunhlolovo yongoti bamabhizinisi azinze e-US abangaphezu kuka-600 kuhlanganisa:
U-52.4% wabasebenzi bamabhizinisi babhekene nokukhathala okudijithali ngenxa yomthamo omkhulu wokuxhumana kwedijithali abakutholayo.
U-80% wabaphenduli bezinga C kanye no-72% wabaphenduli bezinga eliqondile bayabonisa uzizwe ukhungethwe yivolumu yokuxhumana okuphromotha kwedijithali bamukele emsebenzini.
Ama-56.8% ochwepheshe abahloliwe bakhona maningi amathuba okuthi uvule okuthile okutholwe nge-imeyili yangempela kune-imeyili.
Emnothweni Wanamuhla Wokunaka, ikhono lokuthwebula izethameli futhi bathole ukuzibandakanya kwabo sekuyimpahla eyivelakancane. Ukukhathala kwedijithali kuyinto engokoqobo kubantu abaningi, okusho ukuthi izinkampani kufanele zithole izindlela ezintsha zokukhuthaza amakhasimende ukuthi athathe isinyathelo. Ucwaningo lwethu lwakamuva lusikhanyisela ngesimo sanamuhla sokumaketha se-B2B esincintisana kakhulu nokuthi izinkampani zingasebenzisa kanjani amasu ayingxube ukuze zivelele kumakhasimende namathemba.
Nansi i-infographic ephelele enemiphumela yohlolovo ehlobene:
Ukudalulwa: Ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuxhumana se- Ngokukhazimulayo kulesi sihloko.
Tags: 2022ikhalendaukukhathala kokuxhumana kwedijithaliukukhathala kwedijithalimail ngqoinhlolovo yokuzibandakanyainhlolovo yokubandakanya izithameli eziyingxubeinfographiclixarmarketingukuzenzelaimeyili eqondile yomuntu siquimeyili yomuntu siqupflukumaketha ngokomzimba